Ibhokisi yesipho seBoutique
Isiphelo sebhokisi ephezulu yesikhumba
Pearl ibhokisi yobucwebe
Incwadana yamanqaku ephezulu yeshishini
Izitikha ezintle zetattoo
Izitikha zekhathuni zekhathuni
Izitikha zomvambo opholileyo
Kutheni unika izipho ngokupakishwa kwebhokisi yesipho esifanelekileyo
Ukubona ukuba isipho kufanelekile, okokuqala kuxhomekeke ekupakisheni kwaso. Ukuba isipho esikhethwe ngononophelo asinakho ukuphakheja okungafaniyo, ngokuqinisekileyo kuya kusixabisa isipho osinike sona. Ukuba uncamathisela ukubaluleka kwenkqubo yokugqibela "yokupakisha", nokuba isipho ngokwaso asibizi kangako, i-dazz ...
Imvelaphi yamaqanda eIsta
Okokuqala: Chaza iNtombikazi enguMariya waseMagdalena iinyembezi, kwaye ngequbuliso wabona abantu ababini benxibe iimpahla ezibengezelayo bemi ecaleni kwabo. Ukubuyela kwakhe ekhaya, wapeyinta umbono awubonileyo kwiqanda lePasika, emva koko waya kubafundi bakaYesu. Abafundi basebenzisa amahobe ukusasaza umyalezo. ...
Kutheni le nto abantu bekhetha izitikha ze tattoo?
Isitikha setattoo luhlobo lwesincamathelisi somvambo esiqhotyoshelwe emzimbeni. Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, akukho zintlungu, ukunamathela kunokuhlala iveki, ungoyiki ukuhlanjwa, kwaye akukho ngozi kulusu. Ke ngoko, kulula ukwamkelwa ngumntu wonke kuneetatoo zesiko, kwaye kulula ukutshintsha ...
2021 imeko yophuhliso loshishino lokushicilela
Iindawo eziphambili zohlalutyo lwengxelo yohlalutyo ngobume beshishini lokushicilela zezi zilandelayo: 1) Umjikelo wobomi kushishino lokushicilela. Ngokufunda ngomyinge wokukhula kweemarike zeshishini lokushicilela, izinga lokukhula kwemfuno, iintlobo zemveliso, inani labakhuphisana nabo, ukungena kunye nokuphuma kwemiqobo, ...
Ibhokisi yeZipho zokutya Ubungakanani beMarike ka-2021 | Isabelo seShishini seHlabathi, isiCwangciso seNtengiso seShishini, Abadlali abaPhambili, iMeko ye-CAGR, amaThuba okuKhula kunye noQikelelo ku-2027
INew Jersey, eUSA-Ingxelo yophando lwentengiso lwakutshanje olunesihloko esithi "Imakethi yeBhokisi yokutya yokutya" icwangcise ngokungqinelana imixholo ephambili kuphando lwebhokisi yezipho. Ingxelo iqhube isifundo esinzulu kwimakethi yebhokisi yezipho, kugxilwe kwiindlela zokukhula kwamva nje kunye nabaphuhlisi ...
Intsingiselo yokupakisha kwesipho?
Ukupakishwa kwebhokisi yesipho kuye kwaba yimfuneko ebomini. Ukupakisha kubonisa ukunambitheka, intliziyo, isimo sengqondo, inkcubeko, njl. Nokuba akukho mthengisi ...
Ngaba izitikha ze tattoo ziyingozi kulusu?
Abantu abaninzi bafuna ukwenza i-tatoo kodwa bayoyika ukuba ayizukuba lula ukuyisusa emva kwethambo. Ngoku kukho izitikha ze tattoo ezikhoyo. Ayisiyiyo kuphela indlela onokutshintsha ngayo isitayile ngendlela othanda ngayo, kodwa nokususa kulula kakhulu. Ngaba isitikha setattoo ngqo kulusu lwefafa ...
Ukuveliswa kwengxowa yesipho semveliso, inzuzo ayisiyiyo njengoko ucinga
Ngokuqinisekileyo oku akuyonyani kuba sizama ukuphucula amaxabiso ethu. Ngapha koko, inzuzo yeyona mveliso mininzi sele incinci kakhulu. Oku akujongwa kuphela sisikhundla seshishini kwicandelo lonikezelo, kodwa ikwahambelana kakhulu neendlela zophuhliso lwentlalo. Nini ...
Yintoni ukubaluleka kokusebenziseka kwencwadana yamanqaku kwishishini? Kutheni ufuna ukwenza incwadi yeenkcukacha ngokwezifiso
Ukubaluleka kwencwadi yamanqaku yoshishini ngokwezifiso iNote Notepad kaGu Mingsi isetyenziswa njengencwadana yokubhalela iofisi yeshishini. Kwimeko yokusetyenziswa kwemveliso, ubukhulu becala ziseofisini, kumagumbi enkomfa, njl.njl. Ke uneempawu ezifanelekileyo ezisetyenziselwa oosomashishini kwaye zilungele. Incwadana yokubhalela ishishini ...
Kutheni ukhetha iibhegi zamaphepha kunye nendima yeebhegi
Ukupakishwa kweebhegi ezinkulu akunikezeli kuphela abathengi, kodwa kukwathatha nethuba lokukhuthaza iimveliso okanye iimveliso kwakhona. Ibhegi eyenzelwe kakuhle iya kwenza abantu bayithande. Nokuba ibhegi ephethe uphawu lwentengiso okanye intengiso, abathengi baya kukuvuyela ukuphinda bayisebenzise. Olu hlobo lwe-han ...
Ukuthetha malunga nophuhliso lwezixhobo zephepha kuyilo lokupakisha
Ngophuhliso oluqhubekayo lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, iphepha liye laba yeyona nto isetyenziswa kakhulu kwaye isetyenziswa kakhulu ekupakisheni kwishishini lokupakisha kuwo onke amazwe ehlabathini. Isetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni intengiso kunye nokuthuthwa kwempahla, i ...
Kutheni unika izipho kwiibhokisi zezipho ezigqibeleleyo is
Ukutshintshiselana ngezipho yenye yeendlela ezibalulekileyo zokuba abantu babonakalise ubuhlobo kunye nokomeleza ubudlelwane. Izipho zinikezelwa kuluhlu olubanzi lwezinto: abantwana, abantu abancinci, abantu abaphakathi, abantu abadala, ootitshala, oogqirha, njl njl. Umahluko ...